Dhageyso: Fiqi oo si carro leh uga hadlay war kasoo baxay Mareykanka - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Fiqi oo si carro leh uga hadlay war kasoo baxay Mareykanka
Dhageyso: Fiqi oo si carro leh uga hadlay war kasoo baxay Mareykanka
Muqdisho (Caasimada Online) – Taliska ciidamada Mareykanka ee Africa [AFRICOM] ayaa shaaciyay in dadkii ay ku dileen howlgalkii ay ka fuliyeen 25-kii bishii August ay ahaayeen cadow hubaysan.
AFRICOM war qoraal ah oo ay soo saartay ayaa lagu sheegay in baaritaan kadib ay ogaadeen in wax shacab ah aysan ku dhiman weerarkii ka dhacay beerta ku taalla nawaaxiga Bariire.
Warkan ayaa lidi ku ah mid kasoo baxay dowladda Federaalka isla bishii August oo ay ku sheegtay in 10 ruux oo shacab ah lagu dilay howlgalka ciidamada Mareykanka iyo kuweeda ka fuliyeen Bariire.
Waxay sidoo kale dowladda Soomaaliya ka bixisay dadkii ku dhintay weerarka lacag magdhaw ah, taasi oo gaarayso 100-kun oo dollar qofkiiba, sida wararku ay sheegayaan.
Axmed Maclin Fiqi, oo ah Xildhibaan katirsan Aqalka hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay BBC-da ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay warka kasoo baxay Mareykanka ee lagu sheegay in cadow ay ku dileen howlgalka.
Fiqi ayaa tilmaamay in dowladda Federaalka, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ay Twitter-dooda ay kusoo qoreen in weerarka dad shacab ah lagu dilay, haddana wax yar kadib ay ka tireen markii sida uu sheegay ay la kulmeen cadaadis dibada ah.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale xusay in AFRICOM warkooda uu xad-gudub ku yahay cadaaladii ay sugayeen ehelada dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay, islamarkaana ay ayaan darro ku tahay dowladda Federaalka oo wali ka aamusan dhacdadaasi.
Gudi xaqiiqa raadis ah, oo uu hogaaminayo Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaalle oo tagey Bariire weerarka kadib ay warbixinta baaritaankooda kusoo celiyeen Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, balse ay meel iska dhigeen kiiska oo dhan, sababtuna tahay cadaadis dibadda uga imaanaya.